I-China YF-H-201 Home Nightstand Side Table Umkhiqizi nomhlinzeki | Yifan
Kulula ukuyihlanza, ukumelana nokushisa okuphezulu, indawo enkulu yokugcina, indawo encane, amadilowa avaliwe wokuvikela uthuli kangcono…
Kulula ukuhlanza, ukumelana nokushisa okuphezulu, indawo enkulu yokugcina, indawo encane, amatafula avaliwe wokuvikela uthuli kangcono
Isibambo esenziwe nge-alloy yensimbi esezingeni eliphakeme siyinto enhle kakhulu, i-rustproof, anti-oxidation, ihlala isikhathi eside futhi yinhle.
Ibhakede lenzelwe ukubekwa kalula nokubekwa kwezinto ezincane. Ngopende ovulekile nopende onobungane, iveza ukuthungwa nokuthungwa.
Letha isitayela sesimanje esihamba phambili ekhaya lakho ngaleli thebula eliseceleni. Ngokufaka phezulu okumhlophe nesisekelo sethusi, le ngcezu yokugqamisa izoba ucezu oluhle kunoma yikuphi ukuhlobisa.
Idizayini ehlakaniphile eyenziwe yi-YIFAN ingumbukiso obanzi futhi ocacile wefenisha esebenzayo, enesitayela esingamemezi kepha esanamuhla, esishiya indawo yokuzwela komuntu nokunambitheka komuntu ngamunye, ukuhlanganisa ubujamo, imibala nezinto zokwenziwa emdlalweni wamathuba angenamkhawulo. Ububanzi bawo obubanzi manje buhlanganisa izinto ezingaphezu kwe-800, eziningi zazo ezitholakala ezinhlobonhlobo zokuqeda ukwenza kube lula kubathandi bemiklamo yangaphakathi ukwenza ngezifiso izindawo zabo zokuhlala ngendlela yesimanje nemfashini.
I-YIFAN iyisiqinisekiso sekhwalithi nobuciko ngentengo efinyelelekayo, idizayini yesimanje, eguquguqukayo futhi ehlakaniphile.
Faka isitatimende esinesibindi egumbini lakho lokuphumula noma ekamelweni lokulala naleli tafula lokuphela lesimanje. Itafula elingunxande futhi libanzi phezulu laminishwe ngokubukeka kwe-marble beige, elenziwe ngezinto ezibonakalayo ezisezingeni eliphakeme ze-MDF lifaka idilowa elilodwa elikhulu lokugcina ezintweni zensimbi ngesibambo sensimbi segolide esiqondayo. Ukugqama kwaleli tafula kufanele kube yisisekelo sensimbi yegolide esinomklamo omncane kodwa wobuciko. Leli thebula elenza imisebenzi eminingi lisebenza kahle nasendaweni yokulala yesimanje njengendawo yokuma ebusuku noma ibekwe eduze kosofa wesitayela wanamuhla noma isihlalo egumbini lokuphumula. Umhlangano uyadingeka.
Langaphambilini I-YF-H-807 Contemporary Italian Lacquered Designer Chest Of Drawers
Olandelayo: I-YF-H-202 Amathebula Wombhede Wokunethezeka Inhlanganisela
I-YF-H-202 Amathebula Wombhede Wokunethezeka Inhlanganisela